အေးစက်နေတဲ့ပင်လယ်စာ, အေးစက်နေတဲ့ Shell ကငါး, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Scallops - ကောင်းမွန်သောပင်လယ်
လှော် Marine Mackerel
Argenina Shirmp ဆူရှီ
Breaded ပြည်ကြီးငါး tentacles
ကောင်းအရှေ့တောင်အာရှအစားအစာ CO ။ , LTD မှ။
ကောင်းသောပင်လယ်အစားအစာ Co. , Ltd ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအားလုံးထံမှဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်, လတ်ဆတ်နှင့်တန်ဖိုးရှိသောပင်လယ်စာ sourcing သောပင်လယ်စာထုတ်ကုန်များတဲ့ professional ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမှာ: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် scallops, ပင်လယ် scallops, Clam, ကဏန်း, mussel, ပြည်ကြီးငါးပြွန် / ကွင်း, ပြည်ကြီးငါးအပွင့်, halibut ငါး / mackerel / ကော့ / Pollock / ဆော်လမွန်ငါး / haddock / hake တန်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟူသောဂတိတော်သည်: ဖောက်သည်ရန်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ကုမ္ပဏီ၏အသက်ပေတည်း "နှင့်" Sucess "အသေးစိတ်အားဖြင့် decied ဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်းသောပင်လယ်အစားအစာ Co. , Ltd လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှဖောက်သည်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်, လတ်ဆတ်နှင့်တန်ဖိုးရှိသောပင်လယ်စာ sourcing သောပင်လယ်စာထုတ်ကုန်များတဲ့ professional ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမလိုအပ်သည့်အခါတိုင်း, ငါတို့ပဲဒီမှာပါ! ကောင်းသောပင်လယ်အစားအစာ Co. , Ltd ။ သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တည်ငြိမ်မိတ်ဖက်မကြာမီပါ!
ဂရင်းလန်း halibut ငါးတုံး
atlantic mackerel တစျပိုငျးကို
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် scallops (1)
ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် scallops (4)
နှင့် "Sucess အသေးစိတ်အားဖြင့် decied ဖြစ်ပါတယ်" "ဖောက်သည်ရန်အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ကုမ္ပဏီ၏ဘဝအသက်တာဖြစ်တယ်" ။
အပေါ်ပင်လယ်ပြင် scallops သမင်ဒရယ်
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုလိုအပျသ Wheneven ကျနော်တို့ကဒီမှာများမှာ!
ပင်လယ်ပြင် Scallops သမင်ဒရယ်ဟာ Off
နေရပ်လိပ်စာ: RM 1811, Zhengyangdongjun, အဘယ်သူမျှမ 26 Zheng ယန်လမ်း, Qingdao, တရုတ်
© Copyright - 2010-2022 : All Rights Reserved. ပူပြင်းတဲ့ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - amp မိုဘိုင်း
အတ္တလန္တိတ်စာလမုသမင်ဒရယ် , နှပ်မုန်လာ , အေးစက်နေတဲ့ Engawa, အေးခဲငါး , Frozen ပျံငါးသမင်ဒရယ် , Frozen Seaweed Salad,